Dating Nobuhlobo Iseluleko - Ungayibona Sebenzisa Law of Attraction Ukuthola Uthando Lweqiniso?
Ngakho lokho uMthetho Attraction? Ngamafuphi nje kuba Law Universal ukuthi uthi sizobe ukuheha ekuphileni kwethu izinto thina sigxila, ngabe kuyinto enhle noma embi. Kungakhathaliseki ukuthi ziyazi noma cha, yonke imicabango une, yonke imizwelo uzizwa, konke okuzwayo futhi ufunda, sihlasela engokoqobo yakho.
Ngakho lokho kusho ukuthini ukuba enzeni dating nobudlelwano?
Ngokuqonda ngempela lokho wena ofuna ukuba nobuhlobo nokusebenzisa Law ethile eyisisekelo izimiso Attraction, uyobe ukuqinisekisa ukuthi uthola lokho wena ufisa ngempela. Kubalulekile ukuqonda ngqo lokho izici ezingokomzimba, ukuziphatha, namagugu, izinkolelo, futhi izithakazelo zibalulekile kuwe ukuze ukwazi ukugxila kulokho ofuna ebuhlotsheni bakho esikhundleni salokho ungafuni.
Khumbula, uzothola lokho sigxile.
Izikhathi eziningi, abantu bayakuphuma kusukela ubuhlobo omunye yehluleka kwenye ngaphandle kokunikeza umcabango okuya kungani noma kanjani ubudlelwano babo qhubeka kokuhluleka. Kungcono kakhulu, Base phezu lesifanele futhi bagcina nomunye ukuthi ehluleka efanayo, kodwa okuphambene izizathu extreme.
“Uma ufana ngineminyaka, wena nakwazi yini ngempela ufuna
kusukela ubuhlobo bakho olandelayo ñ kuphela kufanele kube oluhluke ngokuphelele
elokugcina ahlulekile kangaka ngiphumelele!”
I zazazi ukuthi yini bengingafuni ñ okungenani kusukela ubuhlobo ukuthi nje yaphela. Bekungeke yini kube enkulu uma mina kwakuyothatha isikhathi ucabange zonke ubudlelwano bahlulekile kuhlanganiswe konke benhliziyo zibe munye umbono ocacile walokho Ngenza futhi engafuni in a ubuhlobo? I ukuze basindiswe ngokwami ​​a senhliziyo ezimbalwa pendulum.
Kanjani I 'Ukuheha’ ubuhlobo ephelele me?
Ngizofika ukukubonisa real esheshayo futhi elula indlela Ukuheha umuntu ngqo ukuthi ufuna – Iphupho Your date!
Thatha out a sephepha bese ubhala phansi konke ofuna ebuhlotsheni bakho ephelele. Kuyini yena uthanda? Ukwenza kanjani Babukeka, iphunga, inkulumo? Yiziphi izinhlobo zezinto ozoyenza ndawonye? Uzizwa kanjani uma uphakathi kwabo? Ngempela ungene lokhu futhi uthathe isikhathi ukubhala phansi yonke imininingwane. Kuyoba kuhle kunomvuzo in the end.
Abantu abaningi abaze bathathe lesi sinyathelo yokuloba ukuthi bafunani kodwa nokho single isinyathelo esibaluleke kakhulu ekutholeni umngane amaphupho abo.
“Uyazi ukuthi ngokumane ngokubhala phansi okufunayo, wandisa amathuba akho okuthola it by 80%!”
Cabanga nje ngalokho for a minute…
Ungangabazi wena. Lokucabanga ukuthi wena ephelele ngazo zonke izindlela futhi akukho lutho ukuma endleleni yakho yokuthola ngalokho kanye okufunwa nguwe. Not imali, noma sibukeka, noma isikhathi, noma yini enye.
“ImagineÖ Ungaba yini ofuna!”
Uma usuqedile lokhu, uzobe kahle ngaphambi the game. Thatha njengoba nje udinga… Lokhu isihluthulelo sempumelelo kho ultimate!
Yiba KAKHULU ucacile engqondweni yakho ngalokho okufunayo. Otherwise, the Universe ngeke basuke bengazi ukuthi ngempela ufuna ñ futhi yilokho kuyokunikeza. (Just a inothi okusheshayo, lapho ngithi 'Universe', I mean uNkulunkulu, Buddha, Izingqungulu Zomhlaba, noma whatever term ozisebenzisayo for amandla akho jikelele ephakeme.)
Confused? Hlala nami hereÖ Cabanga uya endaweni yokudlela futhi iyala ibhega. The weta uphendulela ukuze yakho. Ngaphambi ifika hamburger yakho, wena ushintshe oda lakho. Manje wena ukutshela lo weta ukuthi ufuna ngempela Steak. The weta uphendulela ukuze yakho. Ngaphambi ifika Steak yakho, umtshela weta ukuthi aphinde baye bashintsha umqondo wakho futhi ungathanda a isaladi. Kuleli qophelo, oweta kanjalo sasiyothola iningi akutshele ukwenza ngokwakho isaladi. The Universe ngeke akwenze lokhu, kodwa uyabona yini ukuthi singakanani kunzima kakhulu Universe ukukunika kahle ukuthi ufuna uma ungenawo ngisho bazi?
OK ñ isiqedile?
Uma awaphindanga ñ hamba emuva futhi ukwenze. Ngathi lokhu kungaba elula, kodwa kusadingeka ukwenza okuncane umsebenzi.
Manje wena ungumuntu kucacile ngalokho ngempela abafisa umlingani, take that sephepha, phinda it up and bawuthwale nawe okungenani ngesonto. Bawuthwale ephaketheni lakho, in esikhwameni, noma izingubo zangaphansi yakho. Akunandaba lapho akubeka, njengoba nje wena qhubeka it nawe okungenani ngesonto. Njalo ukhumbule ukuthi unayo le sephepha nawe, khumbula umuzwa walokho kuyothiwa othanda ukuba nomlingani wakho. Ngempela ukuwuzwa!
Kukhona esinye isinyathelo nakakhulu kakhulu. Kuleli sonto, qinisekisa ukuthi ulalela esiswini sakho, noma izwi langaphakathi. Uma ekutshela ukuba ayeke eseneminyaka zokuhlanza owomile ngoLwesibili ngesikhathi ngokujwayelekile uya ngoLwesine, hamba ngoLwesibili! Ungase uhlangane umphefumulo mate imi yakho line. Iphuzu lapha liwukuthi uke wabeka oda yakho ne Universe, Manje kudingeka sinake izimpawu kuthunyelwe indlela yakho futhi ACT ON THEM!